Indlu yoQeqesho oluNtofontofo ecaleni kwehlathi eKnutsford - I-Airbnb
Indlu yoQeqesho oluNtofontofo ecaleni kwehlathi eKnutsford
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPaddy And Jess
Indlu yoQeqesho sisakhiwo esitsha, esiphakamileyo, esimelene nemithi kwiziko laseKnutsford. Umgangatho ongezantsi, ikhitshi elifakiweyo kunye negumbi elikhulu elimanzi elineshawa yoxinzelelo, zonke ezinobushushu obuphantsi. Umgangatho ophezulu yindawo entle kakhulu, i-60 yeemitha ezizikweri zomgangatho omhlophe we-larch njengoko ubonwa kwigalari ye-Saatchi, i-intshi engama-50 kamabonakude, i-sonos stereo, i-wifi enesantya esiphezulu, ibhedi ekumgangatho ophakamileyo wenkosi ene-goose down duvet kunye nemiqamelo. Sibonelela ngezinto zokulala ezikumgangatho ophezulu kunye neetawuli. Kukho inkundla yabucala ejonge emazantsi.
Le yipropathi esanda kwakhiwa enikezelwe kweyona migangatho iphezulu apho yonke into iye yakhethelwa umgangatho kunye nobunewunewu. Iimbono eziphuma kuzo zonke iifestile ziyamangalisa ngakumbi kwigumbi eliphezulu apho iindwendwe zijonge ngaphesheya kwehlathi elikufuphi kunye neegadi ezintle.
I-Tabley Road yenye yeendlela eziphambili zaseKnutsford. Umthi ozolileyo osecaleni komthi oziihektare ezingama-50.....I-Heath, kodwa yimizuzu nje embalwa uhamba usuka kumbindi wedolophu oyimbali. ITatton Park, i-2000 yeehektare zekhaya elihle kunye nepaki kukuhamba imizuzu emi-4. Indlu enkulu likhaya elibalulekileyo endleleni kwaye iNdlu yoQeqesho ibucala ngokupheleleyo kwaye isusiwe kwipropathi ephambili, eyakhiwe ecaleni kwehlathi elikufuphi. Ngaphandle kwendawo entle kukho iindlela eziqhagamshelweyo kunye nesikhululo seenqwelomoya saseManchester imizuzu eli-15 kude, iManchester imizuzu engama-30, kunye neLiverpool imizuzu engama-40 kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Paddy And Jess
We are both medical Doctors who have busy vibrant lives and keep fit and active.
We both love cooking, gardening, snow skiing and Watersports.
Siyafumaneka ukuba kukho naziphi na iingxaki kodwa iindwendwe zethu zikhetha ubumfihlo obunikezelwa yiCoach House.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Knutsford